Faransiiska oo ku guulaystay Koobka Aduunka ee kubadda cagta - BBC News Somali
Faransiiska oo ku guulaystay Koobka Aduunka ee kubadda cagta
15 Luulyo 2018
Xulka Faransiiska ayaa noqday horyaalka dunida ee kubadda cagta, ka dib markii uu ciyaar xiiso leh oo kama dambaystii tartanka Koobka Aduunka ah kaga guulaystay afar iyo laba gool xulka Croatia.
Rayn rayn iyo riyaaq ayaa ka dhacay garoonka ciyaartu ka socotay ee Luzhniki Stadium ee Moscow ku yaal halkaas oo madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, uu xulka dalkiisa ugu sacab tumayey.
Waxa kale oo xaflado damaashaad ahi ka dhaceen magaalooyinka dalka Faransiiska oo dhan oo ay taageerayaasha xulka dalkaasi ugu dabaal dagayeen mar labaadkii dalkoodu ku guulaysto Koobka Aduunka ee kubadda cagta.
Guushu waxay Faransiiska ku raacday afar gool oo laba ka mid ah midkood xulka Croatia iska dhaliyeen iyo mid Rigoore ah markii dib loo eegay qalabka muuqaalka duuba ee kaaliya garsooraha ciyaartu (VAR) muujiyey in khalad dhacay hase yeeshee calaamad su'aal weyn dadka qaarkii saareen go'aankaas.
Image caption Madaxweynaha Faransiiska oo damaashaadaya
Labada gool ee kale waxa u dhaliyey xulka Faransiiska xidigaha soo kacaya ee kala ah Paul Pogba iyo Kylian Mbappe oo noqday kuraygii dhawr iyo toban jir ah ee ugu horeeyey ee gool ka dhaliya ciyaarta kama dambaysta ah ee Koobka Adduunka tan iyo sanadkii 1958 Pele dabadii.
Tabobaraha xulkaas Didier Deschamps ayaa sheegay in, inkasta oo Faransiisku aanu soo bandhigin ciyaartii wacnayd ee laga filayey ay hadana kooxdu muujisay awood maskaxeed.